“तेमालको बजेट, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा केन्द्रित छ”– सलाम सिं तामाङ – Radio Roshi
“तेमालको बजेट, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा केन्द्रित छ”– सलाम सिं तामाङ
in अन्तरबार्ता / स्थानीय तह — by Roshikhabar —	July 5, 2020
० अगामी वर्ष २०७७र७८ का लागि ४९ करोड ५६ लाख ६६ हजार ७ सय ७२ रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनु भयो । गरिब तथा विपन्न नागरिकहरूको लागि यो बजेटबाट के अपेक्षा गर्ने ?
– अहिले हामीले यो २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा चाँहि हामीले ज्यालादारी गर्ने बेरोजगारीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा अलि बढि फोकस गरेर बजेट ल्याएका छौं ।
० ज्याला गर्ने नागरिकहरू जस्को जग्गा जमिन कम छ, त्यस्ता वर्गका लागि यो बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला ?
– यसको लागि तेमालमा विश्वव्यापी फैलिइएको कोरोना भाइरस कोभिड­१९ को संक्रमणबाट सुरक्षित राख्न जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने भन्ने एउटा भएको हुनाले अहिले विदेशबाट फर्केर तेमालमा आउनु हुने सबै दाजुभाई दिदीबहिनीहरूलाई चाँहि यो कृषिमा आधारित र सबै हामीले चाँहि सक्षम बनाउनको लागि ९ वटै वडामा कृषिमा बढि फोकस गरेर वडालाई नै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि गाउँपालिकामा केन्दि«त नगरेर विकेन्दि«त गरेर वडालाईनै हामीले बजेटहरू पठाइएका छौ ।
० गाउँपालिकाबासीले कृषिमै आश्रित हुँदा के के गर्न सक्छन ? तपाईका नीतिहरू कस्ता छन ? ता कि उनीहरूलाई फाइदा पुगोस् ।
– कृषि क्षेत्रकै लागि चाँहि बाँझो रहेको जग्गाहरूलाई पहिलेकै आमा बुबाहरूले मात्रै गर्नु भएको थियो, यो कोरोनाले गरेर तेमालमा चाँहि सबै दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू गाउँमै फर्केर गाउँमै खेती गर्ने उदेश्यले चाँहि गाउँपालिकामा बजेट राखेर राम्रो हुँदैन भनेर प्रत्येक वडालाई नै बजेट हामीले पठाएको हो । वडाले नै उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू नै नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ ।
० प्रतिनिधिले आवश्यकता नहेरी खल्तीबाट योजना ल्याउछन भन्ने गुनासो आइरहँदा तपाईको पालिकाले कसरी काम गर्दै छ ?
– यसपालि चाँहि अलिकति सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर वडा अध्यक्षज्युहरूले राम्रो गर्न सकुन भनेर यो असारको १ गते देखि ७ गतेसम्म निरन्तर हामीले यो मिटिङहरू राखेर नीति बनाएका छौँ । उहाँहरूले चाँहि वडाबाट वडामा नै यो सामाजिक सुरक्षाको अलिकति व्यवस्था मिलाएर ल्याउनु भएको छ । र उहाँहरूले ल्याउनु भएको कुरालाई नै तेमाल गाउँपालिकाले मध्यनजर गरेर हामी व्यवस्थित गर्छौ भन्ने उहाँहरूको सबै निर्णय यो कार्यपालिकाको निर्णय भएको हुनाले हामीले प्रत्येक वडालाई जनसंख्या र भूगोलको हिसाबले बजेट निर्धारण गरेर पठाएको छ ।
० वडा अध्यक्षहरुको योजना साँचिकै जनताको पक्षमा अथवा जनताको माग अनुसारको बनाइएको छ ?
– मैले वडाध्यक्ष ज्युहरूसँग घनीभुत् रूपमा छलफल गर्दा खेरि मेरो वडाको जनता चाँहि मेरो जिम्मेवारी हुन्छ र मेरो वडामा भएको युवाहरू चाँहि व्यवस्थित रूपले परिचालन गर्न सक्छु । बेरोजगार युवाहरूलाई पनि हामी आफैले राम्रो गर्न सक्छौ भन्ने प्रत्येक वडाध्यक्षहरूको कुरा व्यवस्थित रूपले आएको अनुसार र हाम्रो यो यो भएको छ भन्ने कुरा अनुसारले मैले बजेट बिनियोजन गर्दिएको हो ।
० आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा बरोजगार युवाहरू अथवा बेरोजगार तपाईको तेमाल गाउँपालिका बासीलाई रोजगार दिन के कस्ता कार्यक्रमहरू समावेश गर्नु भएको छ ?
– अहिले यतिको विश्वास गर्न हुँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूले तपाईले हामीलाई विश्वास गर्नैपर्छ र हामीले यति व्यवस्थित रूपले ल्याएको योजनालाई तपाईले स्वीकारनु पर्छ भन्ने कुरा ९ वटै वडाका अध्यक्ष ज्युहरू र कार्यपालिकाको ६ जना सदस्य ज्युहरू सबै १७ जनानै बसेर भन्दाखेरि हामी तयार छौं, हामीले व्यवस्थित गर्छौ भनेपछि मैले विश्वास त लिनैपर्छ । मैले बेरोजगारको लागि ल्याउने भनेको अथवा तेमालमा बेरोजगारको लागि ल्याउने भनेको बाँझो रहेको जग्गाहरू कृषिमै आधारित गरेर बाख्रापालन, भैंसीपालन ती कुराहरू गर्ने भन्ने आउँछ । पहिला तेमालको पर्यटनमा बढि थियो । त्यो पर्यटनमा त्यति राम्रो नभएको हुनाले सबै गाउँमै बसेर कृषिमै आधारित हुने हो । अर्को बेरोजगारको लागि तेमालमा कुनै कम्पनीहरू कुनै उद्योगहरू छैन र कृषिमै आधारित भनेको चाँहि यो कुखुरापालन बाख्रापालन र भैंसीपालन यस्को लागि मात्र आधारित भएको हूनाले यसबाटै आधारित हुने बजेट हामीले छुट्याएको छ ।
० भनेपछि वडाबाट यसपालीको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रोजगारको लागि कार्यक्रमहरूको माग भएर आएन ?
– सबै वडाका अध्यक्ष ज्युहरूलाई मैले तपाईले जस्तै सोध्दाखेरि उहाँहरूले हामी विश्वस्त छौ र हामी ढुक्क छौ । हामी बेरोजगारहरूलाई चाँहि रोजगार दिन हामी सक्छौ र हामीलाई केन्दि«त नगरेर विकेन्दि«त गर्दिनुस् भनेर उहाँहरू सल्ला सूझाव अनुसार चाँहि सबै बजेट बिनियोजन गरेर दिएको छ ।
० कुखुरापालन बाख्रापालन र कृषिमा रोजगार सृजनाको लागि अब गाउँपालिकाले जनतालाई के दिन्छ त ?
– गाउँपालिकाले त अब पशुपन्छी शाखा पनि वडास्तरमै विकेन्दि«त गरेरहेको छ । सबै कृषिको पनि वडा स्तरमै पठाएको छ । शिक्षा मात्रै तेमाल गाउँपालिका केन्दि«त छ । अरू सबै मैले वडा स्तरमा पठाइसकेको छु । जहाँ नि आफै गर्छु भन्नु भएको छ त्यसकारणले वडाध्यक्ष ज्युहरूसँग ढुक्क छु उहाँहरूले बेरोजगारको लागि रोजगारी दिनको लागि काम गर्नुहुन्छ ।
० प्रस्ट भनिदिनुस् न अध्यक्षज्यु जनताले अनुदान पाउँने भएकी जागिर पाउँने भए त अब ?
– जागिर पाउँने कुरा त वडामा हुँदैन । रोजगारीचै अब गाउँपालिकाले दिन सक्दैन त्यसकारणले उहाँहरूको जुन आफ्नो आफ्नो बाँझो जग्गा छ त्यो सबै कृषिमा आधारित कृषि उत्पादन गरेर बेरोजगार नहुने र रोजगार आफैमा सृजना हुने किसिमले गरेको छ ।
० भनेपछि यहाँको नागरिकहरूले कृषि कार्यहरू गर्न चाहेमा गाउँपालिकाबाट अनुदान पाउनु हुने भयो !
– उहाँहरूले गर्नुहुन्छ गर्नुहुनेछ भन्ने यसपालिको यो कोरोना माहामारीले गर्दाखेरि धेरै बाँझो भएको जग्गाहरू अहिले सबै उहाँहरू बसेर मकै छर्ने र बिग्रिरहेको जग्गाहरूलाई खनजोत गरेर बसेकोले चाँहि म विश्वस्त छु । उहाँहरू गाउँमै बसेर खेती गरेर आत्मनिर्भरको लागि उहाँहरू गर्नुहुन्छ भन्ने म विश्वस्त छु ।
० बाँझो जग्गामा खेती गर्न यहाँको गाउँपालिकाले वडाले कोदालो दिन्छ भन्न खोज्नु भएको कि बिउँ दिन्छ भन्न खोज्नु भएको हो कि के चाँहि दिन्छ भन्न खोज्नु भएको स्पष्ट भनिदिनुस् न ।
– यसमा कोदालो दिने भन्ने कुरा चाँहि हैन तर बेरोजगारहरूको लागि चाँहि जुन किसिमको ह्ुन्छ बाख्रापालन, कुखुरापालन र भैंसीपालनहरूको लागि रोजगारी त्यस्मै छ । गाउँपालिकाले भैंसी पालेर रोजगारी दिने भनेको हैन ।
० मानौं कुनै एक जना युवाले भैंसी पालन गर्ने भयो भनेदेखि यहाँहरूले पाल्ने होकी अनुदान दिने हो ?
– ५० प्रतिशत अनुदानको कुरा पनि हामीले गरेका छौँ ।
० एक लाख रूपैयाँ पर्यो भने गाउँपालिकाले ५० हजार अनुदान दिने भयो त्यसो भए आगामी आर्थिक वर्षबाट, यसरी भैंसी किन्दाखेरि कति जनाले पाउँने त सबैले किन्ने होला फेरि ?
– सबैले किन्न त सक्दैन । उहाँहरूलाई पनि वडाले छनोट गर्नुहुन्छ । कुनले के गर्छ भन्ने कुराहरू वडाले नै छनोट गर्नुहुन्छ । कसले पाउँने भन्ने कुरा वडाध्यक्ष ज्युहरूले नै छान्ने भयो ।
० चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट चाँहि तेमालको जनतालाई यहाँले के के दिन सक्नु भयो त ?
– यो वर्षमा त हामीले तेमाललाई शिक्षा फोकस गरेका थियौँ । अनि, स्वास्थ्यमा थियो । उहाँहरूलाई अहिले सुविद्या सम्पन्न त गर्नै सकिराको छैन । बजेटको पनि धेरै कमी छ त्यसकारणले उहाँहरूले पाउँने पर्ने सुविधा, हामीले गर्न सक्ने त अब प्रत्येक घर घरमा हिउँदे सडक पुराइसकेका छौँ । त्यस्को चाँहि ठोकुवा रूपमा भन्छु । यो माथिलो भेगमा नारायणस्थान र यो नारायणस्थान वडा नं. ५ को याङबेल वडा नं. ७ को चापाखोरी त्यतातिर अलि पानीको समस्या र अर्का ठाउँबाट हामीले पानीको सुविधा पुर्याएका छौँ । त्यो चाँहि हामी भन्न सक्छौ ।
० तपाईलाई गर्न सके जस्तो काम अर्थात यो वर्ष गरेको काम मध्ये तपाईलाई पनि सन्तुष्ट हुने काम र जनताले पनि प्रत्यक्ष अनुभुत गर्न सक्ने काम चाँहि के के गर्नु भयो त ?
– अहिले हामीले त्यति देखिन्ने काम गर्न सकिराको छैन बजेटको कमी र प्रत्येक वडामा बजेट हामीले पठाएको हुनाले । ७ सय ५३ स्थानीय तह हुन्छ नेपालमा त्यो मध्ये पनि १३ वटा स्थानीय तह काभ्रेमा हुँदै गर्दाखेरि नीति तथा कार्यक्रममा चाँहि हामी धेरै पछाडी हो । तर १३ स्थानीय तहमा चाँहि तेमाल पहिलो नम्बरमा पर्छ होला । प्रत्यक वडामा जति बजेट आएको छ त्यति भागभन्डा गरेर दिने तेमाल गाउँपालिका पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ।
० कसरी के काम गरेर १ नं. मा पर्छ भन्नुभयो ?
– वडाहरूको समीक्षा त अब गर्नै बाँकी छ । प्रत्येक वडाले संमिक्षा चाँहि गर्नैपर्छ । तर गाउँलेहरूलाई अलिकति राम्रो सुविधा सम्पन्न भनेको चाँहि पुर्वाधार विकासमा, यो सडकमा नै बढि हो । र शिक्षामा पनि राम्रै भइरहेको छ । मैले भन्नै पर्दाखेरि चैत्तदेखि अहिले कोरोना भएको हुनाले शिक्षामा अलि राम्रो देखिएन । शिक्षामा तेमालमा राम्रै व्यवस्था गरेको मैले महशुस गरेको छु । यो एसईईको परिक्षा राम्रो गर्न नसकेकोले अलिकति शिक्षामा हामीले यो गर्यो त्यो गर्यो भन्न भएन त्यसकारणले । खानेपानी र हिउँदे सडक त्यो चाँहि मैले भन्नै सक्छु गरेको भनेर ।
० वडामा पैसा बाँढेर तपाई जस र अवजसबाट त पन्छिनु भयो अब वडाबाट गरेको काममा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त ?
– वडामा मैले सबै वडाबासीलाई सम्पर्क गर्दा अथवा म वडामा पुग्दाखेरि उहाँहरूले चाँहि ठिकै छ भन्नु भएको छ । त्यो भन्दा त अरू मैले भन्न सक्दिन ।
० उहाँहरूले अहिलेसम्मको काम गरेको हेर्दाखेरि यहाँलाई राम्रो जस्तो लाग्छ या राम्रो ठिक छैन जस्तो लाग्छ, के लाग्छ ?
– म हिन्दाखेरि त्यहाँ सबै वडाबासीहरूलाई सोध्दाखेरि ठिकै छ राम्रै गर्नुभएको छ वडाध्यक्षज्युहरूले हामीलाई मात्रै भन्नु भएको छ । त्यो भन्दा बढि र म त्यहाँ वडाको पनि हैन । उहाँहरूले राम्रै छ भन्नु भएको छ । त्यो चाँहि राम्रै गर्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
० तपाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो सबै वडा त तपाईको नै हो । वडाले गरेको काम तपाईलाई राम्रो लागेको कुरा केहि त छ होला नि पक्कै पनि ?
– वडाले गरेको काम देख्दाखेरि, उहाँहरूले त राम्रै भन्नु भएको छ । तर म प्रत्येक टोलबासीमा पुग्दाखेरि ठिकै छ राम्रै गरेको छ, नराम्रो गरेको यल्ले यो गर्यो त्यो गर्यो चाँहि अहिले सम्म सुनेको छैन ।
० यतिखेर हामी कोरोना कहरको बिचमा छौ, हरेक गतिविधिहरू ठप्प छन, स्वास्थ्यको स्थिति आर्थिक, सामाजिक पक्षहरूलाई यहाँहरूले नियाली रहनु भएको छ । अब कसरी अगाडी बढ्ला तेमाल गाउँपालिका ?
– अहिले कोरोनाको बारेमा हामी अलि सर्तक हुनैपर्छ । हामी सर्तक भएन भने तेमालबासीहरूलाई कसरी बचाँउन सक्छौ । विदेशबाट फर्किने क्रम बढि हुँदै छ । उहाँहरूको बस्ने व्यवस्थाको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था, प्रत्येक वडामा ११र११ को बेडको तयारीमा छ । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५ वटा बेडको छुट्टै तयारीमा छ अहिले व्यवस्थित रूपले । अस्ति जिल्लाको अनुगमन टोली आउनु भएको थियो । उहाँहरूले पनि एकदम ठिक छ भनेर अनुगमन टोली जानु भएको छ । यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नको लागि १ करोड १० लाख हामीसँग अहिले मौज्जात छ । यो विपत व्यवस्थापनको लागि कोषमा आउने ५० लाख छुट्टै राखेको छ । स्वास्थ्यको लागि हामीले ६८ लाख छ्ट्टै अर्को कोषमा राखेको छ । यो स्वास्थ्यको लागि, क्वारेन्टाइन र कोरोनाको लागि व्यवस्था चाँहि हामीले राम्रै गर्न सक्छ कि जस्तो हामीलाई लाग्छ ।
० यो समयमा वैकल्पिक माध्यमबाट पढाईको व्यवस्था तेमालमा के कस्तो भइराखेको छ ?
– तेमालमा अब शिक्षाको लागि अलिकति हामीलाई निराशा चाँहि भइरहेको छ । यो तेमालमा अलिकति भौगोलिक हिसाबले अनलाइन सिस्टम्मा जाने भन्दा पनि राम्रो हुँदैन किनभने सबैको घरमा मोबाइलमा इन्टरनेट आउँदैन । टावर अहिले त्यति राम्रो पनि हुँदैन । त्यसकारणले हामीलाई निराशा चाँहि भएको छ । प्रत्येक विद्यार्थीहरूको, नयाँ किताबहरू आफ्नो आफ्नो हातमा पुगेको छ र नजिक हुने सरहरूले चाँहि अलिकति सहजीकरण गर्नु भएको छ । त्यति विश्वस्त चाँहि छैन । त्यति राम्रो चाँहि गर्नु भएको छैन किनभने सबैको हात हातमा ल्यापटप कम्प्युटर हुँदैन । त्यल्ले गर्दाखेरि चाँहि गाह्र्रो भएको छ । शिक्षामा मैले समग्रमा तेमालमा हेर्दाखेरि अलि निराशाजनक चाँहि छ ।
० तर पनि कुनै स्थानीय तहले त रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने, घर घरमा टोल टोलमा गएर सुरक्षित भएर पढाउँने गरेका छन् । यसको लागि गाउँपालिकाले केहि शुरू गर्नु भएको छैन ?
– मैले त्यो शुरू गर्ने भनेको तर यसमा अहिले मैले जिल्ला शिक्षा इकाईमा पनि इकाईका संयोजक ज्युलाई सोधेको सामाजिक दुरी कायम गरेर विद्यालयमा दुइटा सिटमा पनि बिहान र बेलुकाको गर्रौ भन्दाखेरि उहाँले अहिले त्यस्सो नगर्नुस् तपाईले विद्यालयको नयाँ किताब पुर्याएर नजिकको टोलमा तपाईले गर्नुस् भन्नु भएको थियो । यो विषयमा कुराहरू त गरिरहेको हो तर त्यति सहज चाँहि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० तपाईको तेमाल गाउँपालिका अन्र्तगत रहेको विद्यालयका शिक्षकहरू यतिबेला आनन्दले घरमा बसेर तलब खाइराख्नु भएको छ ?
– त्यो चाँहि मैले भन्नैपर्छ, हाम्रो तेमालको शिक्षक सर मिसहरूले चाँहि अहिले यो कुराकानी पढ्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाँहि मेरो दायित्व यो हो भनेर आफ्नो टोलको छिमेकमा गएर अलि सजक गर्दिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ । मैले कुरा त पहिले भनिसके । शिक्षा शाखाबाट पनि उहाँहरू निर्देशन पनि भएको छ । तर त्यति गर्नु भएको चाँहि मलाई थाहा भएन ।
० शिक्षकहरूलाई टोल टोलमा गएर पढाउन परिचालन किन गर्न नसक्नु भएको हो ?
– हाम्रो ४१ वटा विद्यालयहरू छ । मैले ४१ वटा विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्युहरूलाई बोलाएर यो हामीले तुरून्तै गर्नुपर्छ भनेर शिक्षा शाखा र कार्यपालिका राखेर मिटिङ गर्यो । र अहिले यो ०७७/७८को बजेटको निर्धारण र नीति तथा कार्यक्रमको व्यस्तताको कारणले अहिले हामीले मिटिङ राखेर उहाँहरूसँग यो कुरा गर्न पाएको छैन । यो २०/२२ गते भित्रमा हामीले उहाँहरूलाई बोलाएर मिटिङ राख्छौ र यो मिटिङ सकेपछि उहाँहरू कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने तथा प्रधानाध्यपकसँग मिटिङ राखेर कुरा गर्ने जमर्को गरेका छौ । हामीले अनलाइन सिस्टमबाट पनि पढाई शुरू गर्ने भनेको छ । आन्लाइन गर्दाखेरि चाँहि हाम्रो तेमालमा टावर नै राम्रो आउँदैन । अनलाइन त्यति राम्रो छैन त्यसले गर्दाखेरि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने चाँहि १८ र १९ गते भित्रमा यो काम चाँहि हामी गर्छौ भन्ने छ ।
० शिक्षा शाखाबाट जुन प्रकारको सहयोग हुनुपर्ने समन्वय हुनुपर्ने, भएको छ अध्यक्ष ज्यु ?
– यो लकडाउनले गरेर पनि हाम्रो शिक्षा शाखा यहाँ त्यति आउनु भएको छैन । उहाँ आउनु भएको एक हप्ता मात्रै भयो । उहाँ आउँदाखेरि जुन जुन गर्नुपर्ने काम अलि छिटो गर्नुस् त्यो चाँहि मैले भनेको छु । हामीले यो बजेटको कुरा र नीति तथा कायक्रममै कर्मचारीहरू सबै व्यस्त भएको हुनाले अहिले शिक्षामा के गर्ने भनेर समय गएको छ ।
० लकडाउनले गर्दाखेरि तेमालमा खाद्यन्न राहत उपलब्ध गराउने कुराहरू यहाँहरूले यतिबेला सोचिराख्नु भएको छ कि छैन ?
– अहिलेसम्म तेमालमा सम्पूर्ण दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूलाई अस्ति यो कोरोनाको बारेमा, राहतको वितरणमा के गर्ने भनेर छलफल भएको थियो । उहाँहरुलाई अलि गाह्रो भइरहेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । बिहान काम गरेर बेलुका खानलाई धाउधाउ हुने दाजुभाई दिदीबहिनी छनोट गरेर राहत वितरण गर्छौ । राहतको कुरा गर्दा हामी सबैलाई कोरोनाले गर्दा मर्का परेको छ भन्नु भएको हुनाले मलाई अलि गाह्रो भएको छ । हुन त मलाई यस्तो समस्या भयो भनेर कुनै दाजुभाई यसरी आउनु भएको छैन । त्यसकारणले म ढुक्क छु । तेमालमा सबै व्यवस्थित रहेछ भन्ने चाँहि मैले महशुस गरेको छु ।
० लकडाउन शुरू भएको बेलामा विभिन्न संघ संस्थाले र गाउँपालिकाले पनि समन्वय गरेर धेरै राहतहरू बाढ्ने कामहरू गर्नुभयो । यति धेरै दिनहरू बितिरहदाखेरि अब राहत नचाँहिने अवस्था आएर यतिबेला त्यतातिर नसोच्ँनु भएको हो कि ?
– मैले अहिले जुन राहतको लागि सबै कुराहरू गर्दै गर्दा संघ संस्थाहरूले पनि त्यसरी राहतहरूको कुरा गर्नु भएको छैन । तेमालमा अहिले सम्म कुनै पनि संघ संस्थाहरूले, धेरैले गर्नु भएको मसँग रिजल्ट त्यति आएको छैन । हामीले पनि उहाँहरूलाई चामल दाल यसरी दिएको र बाढेको पनि छैन । अब हामी के गर्ने भन्ने कुरामा अब हामी छिटै कार्यपालिकाको मिटिङ बस्छौं
० अन्त्यमा, तेमालबासीलाई यहाँँ के भन्न चाहँनु हुन्छ ?
– अहिले तेमालमा ६ हजार ७७ घरधुरी छ । यो भित्र बस्नु हुने सम्पुर्ण दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहँन्छु भने मैले प्रत्येक वडालाई २०७७/७८ को बजेट बिनियोजन गरेको छु । १ नं. वडालाई ९० लाख ९५ हजार ५५ रूपैयाँ दिएको छ, वडा नं. २ लाई ८३ लाख २१ हजार ६३ रूपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ,वडा नं. ३ लाई ६३ लाख १४ हजार ५७२ रूपैयाँ, वडा नं.४ लाई ७२ लाख १० हजार ६५ रूपैयाँ, वडा नं. ५ लाई १ करोड १७ लाख ८ हजार ५२ रूपैयाँ, वडा नं. ६ लाई ९३ लाख २० हजार ३३८ रूपैयाँ, वडा नं. ७ लाई ९४ लाख २५ हजार ६२२ रूपैयाँ, वडा नं. ८ लाई १ करोड १४ लाख ६४ हजार ४५६ रूपैयाँ र वडा नं. ९ लाई १ करोड ७३ हजार ५४ रूपैयाँ दिएको छ । यो जम्मा ८ करोड २९ लाख २३ हजार ८९० रूपैयाँ मैले बिनियोजन गर्दिएको छ । तेमालको दाजुभाई तथा दिदीबहिनीहरू तपाईहरू प्रत्येक आफ्नो वडामा बिनियोजन भएको बजेट राम्रो सदुपयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । प्रत्येक वडाका अध्यक्ष ज्युहरूसँग तपाईहरूले सहकार्य गरेर कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई बढि फोकस गरेको छ । यसमा चाँहि तपाईहरू आत्मनिर्भर हुनुहूनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।